Ugari neInvestment yeVanuatu uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muVanuatu ye:
● Kugara nekudyara muVanuatu
● Ugari nekudyara kubva kuVanuatu
● Visa yegoridhe muVanuatu
● Pasipoti yechipiri kubva kuVanuatu
● Ugari nekudyara kweVanuatu nekudyara muzvivakwa
Best Vamiriri veCitizenship neInvestment muVanuatu uye Magweta e Citizenship neInvestment muVanuatu uye broker kune real estate Citizenship zvirongwa muVanuatu zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Citizenship neInvestment vamiririri veVanuatu inopa masevhisi ekugara nekudyara muVanuatu, Citizenship nemapurogiramu ekudyara muVanuatu, Citizenship nehurongwa hwekudyara muVanuatu, Citizenship yechipiri nekudyara muVanuatu, Citizenship huviri nekudyara muVanuatu, ugari uye ugari nekudyara muVanuatu , Citizenship yekusingaperi nekudyara muVanuatu, Citizenship kwenguva pfupi nekudyara muVanuatu, Citizenship nehurongwa hwekudyara muVanuatu, Citizenship nehurongwa hwekudyara muVanuatu, Residency nekudyara muVanuatu, Residency nezvirongwa zvekudyara muVanuatu, Residency nehurongwa hwekudyara muVanuatu, wechipiri Kugara nekudyara muVanuatu, mbiri Residency nekudyara muVanuatu, pekugara uye ugari nekudyara muVanuatu, ugari uye ugari nekudyara muVanuatu, hupfumi Residency zvirongwa muVanuatu, Residency nechirongwa chekudyara muVanuatu, Residency nezvirongwa zvekudyara muVanuatu, wechipiri pasipoti muVanuatu, yechipiri pas zvirongwa zvemitambo muVanuatu, yechipiri pasipoti chirongwa muVanuatu, mbiri pasipoti pasipoti muVanuatu, pekugara uye yechipiri pasipoti muVanuatu, repamutemo repasipoti repiri muVanuatu, yechipiri pasipoti nekudyara muVanuatu, yechipiri ugari pasipoti muVanuatu, yechipiri pasipoti chirongwa muVanuatu, chechipiri zvirongwa zve passport muVanuatu, pekugara uye vhiza yegoridhe muVanuatu, mugari vhiza mugari muVanuatu, dhiza vhiza scheme muVanuatu, goridhe visa zvirongwa muVanuatu.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara muVanuatu nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muVanuatu yeU Citizenship nekudyara: USD 150,000
Nhanganyaya Vanuatu uye Citizenship neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveVanuatu
Vanuatu inosanganisira zviwi zvina zvakakosha uye makumi masere zviwi zvitsuwa, zvakatenderedza 80 ayo anazvo. VSA mabasa anowanzo kuve makore maviri apfuura, saka mutauro wemunharaunda kugadzirira wakakosha. Isu tinopa yakakosha mitauro yekugadzirira (Bislama) kunotanga kwemabasa neanotevera kusangana-kumusoro kana zvichikosha panguva yebasa. Kunzwisisa tsika dzepedyo kwakakosha kune basa rine zvibereko, asi ziva izvi zvinogona kuchinja kutanga nechitsuwa chimwe kuenda pane chinotevera. Themes hazviwanzo kutorwa padhuze nenzira yakatwasuka. Kukurukura nyaya dzemhuri nedzepedyo zvinowanzodiwa usati wadzika pasi kuti uongorore izvo iwe semuzvipiri ungangoda.
Vanuatu ndiyo yako paradisiacal tropical chitsuwa chisina kunyanya kukundwa nevanozorora, uye kubva zvino Vanuatu - gumi zvinokurudzira zvinoshanya. Nepo dzimwe ngarava dzekufamba dzichimira kwenguva pfupi kune rumwe rutivi rwechitsuwa chikuru, zvitsuwa zvinogadzira Vanuatu kazhinji hazvisi pane radar yevanhu seFiji neNew Caledonia zvinoita kunge zviri. Ichi chingangodaro chiri chakanakisa sosi chakabatanidzwa neakanyanya runyararo rwevanhu uye kukudzwa kukuru kwezvitsuwa; isu tinonzwa kuti Vanuatu inoirova kunze kwebhora. Vanuatu iri muPacific Ocean uye haisi nzira refu kubva kuAustralia neNew Zealand. New Caledonia inorara mazana maviri nemakumi maviri emakiromita yakananga kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, nepo Fiji iri makiromita mazana masere kumabvazuva. Kune zvitsuwa zvinopfuura makumi masere uye zvine huwandu hwevanhu vangangoita mazana maviri ezviuru. Ita poindi yekutaurirana neVanuatu yekufambisa indasitiri bhodhi nezvezvinhu zvakasiyana siyana zvekuona nekuita muVanuatu.
Zvinogutsa zvinokurudzira kushanyira Vanuatu
1. Vanhu vamwe nevamwe
Ivo vanhu veVanuatu vanofadza chaizvo. Ivo vanotora awa rezuva rekuti vashanyire uye vataure pakati pavo pazvikamu zvebhizimusi munharaunda yePort Vila. Ipo Port Vila iri guta guru, inonyatsoratidza seguta rakanaka uye rakakosha rakavakirwa pachiteshi. Chitsuwa cheMalekula chinopa kunzwisiswa kukuru kwenzira yehupenyu nemagungano eVanuatu
2. Plunging uye kushambira
Iyo kure kubva kuzere kwezvitsuwa inoita kusvetuka uye snorkeling dhiradhi revamwe vanhu. Gordon akawana yake PADI mvumo ipapo uye aive nesarudzo yekuongorora kunyudzwa. Kune zvimwewo zvakaputsika zvakawandisa kuti zviongororwe mune iri mvura yakajeka pamwe nekunaka kwehupenyu hwemumvura. Kune vanoshambira, zviri pachena chiratidzo chaipo mune yakachena mamiriro. Kutyaira imwe sarudzo uye ini ndakatora kuyedza kukuru kufadza chikepe. Iwe unoverenga nezve kuita kunyudza Vanuatu pano. Tsvaga nezve kwaungaenda uchiita kunyura muVanuatu.
3. Enda Bungee uchikwakuka kwayakatangira
Pentekosti Island inozivikanwa nekuve kwakatanga Bungy kusvetuka, kutanga panguva yenguva yekare tsika inonzi naghol, kana nyika pombi. A. Pakati paApril naJune nguva dzose, musi weMugovera, varume muchikamu chekumaodzanyemba chechitsuwa ichi vanobhururuka kubva kumatinji marefu (anenge makumi maviri kusvika makumi matatu emamita) nemiti yakasungirirwa patsoka dzavo. Kunyangwe paine zvine njodzi kuti usvike, zvinowanzoitwa muchiitiko chekuti iwe unofanirwa kutarisa iyi inonakidza tsika.
4. Koshesa mabasa eMagariro
Izvo zvinokodzera kuona chikamu chetsika uye zvemagariro kurovedzwa kwemadzitateguru eVanuatu. Kufamba nemoto kunoshamisa zvechokwadi. Ino inzvimbo iyo iwe yaunowana mimwe mhinduro maererano nezvekuti vanhu veguta vanodzingirira sei, hove, kushandisa zvirimwa uye uye kuti vanochengeta sei chikafu.
5. Ongorora Mapopoma eVanuatu
- Mele Cascades. Pachitsuwa cheEfate, iwe uchaona aya mapopoma. Maonero anotyisa, mvura iri kumuka, uye chiitiko chacho chinoshamisa.
Izvi zvakajairika uye iro sangano rinoita abseiling kubva kuMele Cascades rinoti, "Pamukana wekuti hausi kuenda kupati zuva nezuva, panguva iyoyo hausi kurarama". Ivo vanonzi Edge Adventure nekuseka uye vane chiitiko chinotyisa chekudonha pasi pakuwa uku. Isingatsigirwi nechikonzero chekuti ini handiite masisitimu.
Kugara uye zuva nezuva nharaunda
Isu tinovimbisa vanozvipira vanopihwa yakakosha, yakarongedzwa nyore nemahofisi emagetsi ekubikisa. MuPort Vila neSanto, ungangosvika simba remaawa makumi maviri nemana, nhare, mvura yemutaundi zvinoshanduka, webhu, eateries, masisitimu emotokari yeruzhinji, mhando dzakashongedzwa dzezvitoro, uye netiweki yakakura yevasungwa. Pane mukana wekuti iwe wakavakirwa kumwe kunhu, unogona kunge usina chimwe cheizvi. Guta remvura rinoshanduka nenzira mbiri muVila neSanto inobatwa uye inodzivirirwa kunwa, kunyangwe hazvo iyo mvura yakakwira mucalcium, saka inokodzera kuputika usati wanwa.
Vanuatu inzvimbo ine mwero uye dzimwe mbatya dzekumadokero hadzina kukodzera. Kune varume, tora marefu majean, mabhureki akareba-mabvi, uye mashati akasununguka. Kune vakadzi, madhirezi, masiketi, uye hembe zvinogara zvakapfekwa - mashati asina maoko akawedzera kukodzera. Edza kusafukura ganda pamusoro pemabvi, zvisinei, kunyanya kana uchienda kune zvakajairika zviitiko. Vakadzi vanofanirwa kupfeka zvikabudura kana sarong nehembe pavanoshambira munzvimbo dzisiri nzvimbo dzekutandarira.
Jungle fever inowanikwa munzvimbo huru yeVanuatu kunze kwePort Vila uye vese vanozvipira vanofanirwa kushandisa malarial prophylaxis. Zvidziviriro zvakasiyana zvakatove zvataurwa, semuenzaniso, zvinokambaira zvinokambaira uye maoko marefu / mabhurugwa usiku kana kunze uye mambure ehunhu pauri mukana wekusara munzvimbo dzesango fever.
Kune mashoma mabhangi muVanuatu kunyangwe hazvo sarudzo shoma dziripo kunze kwePort Vila. Isu tinovhura bhuku remunharaunda kune vese vanozvipira kana iwe uchinge wauya kuVanuatu uye mwedzi nemwedzi mari yekutumira inobhadharwa mune izvi. Tarisa makadhi anowanikwa kune vanozvipira vane ANZ kana Westpac maakaundi muPort Vila kana Luganville. Mari iripedyo ndiyo Vatu. Shanyira XE.com yezvino maitirwo emabhizimusi.
Zvekutanga ruzivo rwe Citizenship neInvestment yeVanuatu
Chishoma kudyara kwe Ugari nekudyara muVanuatu
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Vanuatu
Ugari nekudyara kweVanuatu
Visa Kwepasi Kwepasi visa
Kuchengetedza nguva yeUgari nekudyara kweVanuatu
Inogona kuwanikwa neinvestment ye $ 100,000.
Uine mari inosvika madhora zana nemakumi mashanu emadhora unogona kuwana chizvarwa uchishandisa VCP uye chirongwa cheDSP.
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veVanuatu
Investment Sarudzo dze Ugari nekudyara kweVanuatu
Bhizinesi, Real Estate
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweVanuatu
Iyo Republic yeVanuatu ine zviwi zvingangoita makumi masere kumabvazuva kweAustralia. Haisi chete inotyisa paradhiso asi zvakare iri nhengo yeBritish Commonwealth. Nenzira iyi pasipoti yeVanuatu inokupa iwe kubvumirwa kuGreat Britain, kune dzimwe nyika dzekuEurope, uye nyika zhinji dzeAsia. Kana iwe uri kutsvaga kwepasipoti yechipiri, Vanuatu inzvimbo yakakwana nekuda kwenzvimbo yayo yakagadzikana yezvemari, yakanakisa mitero yekugara mutero uye yakanaka telecommunication kwezvivakwa.
Kufamba kwemhuri muVanuatu
Wako wawakaroorana naye, vana vanovimba pasi pemakore makumi maviri nemashanu 25 uye mubereki anovimba anodarika makore makumi matanhatu nemashanu anokwanisa kunyorera pamwe newe uye nekudaro mhuri yese inogona kunakirwa nezvakanaka zvekuva mugari weVanuatu.
Citizenship Nehurongwa hwekudyara muVanuatu insite
Iwe unotanga kunyorera kwako nekutumira kune wako mumiririri kopi yepasipoti yako yazvino, iri mukushanda uye zvakare isina-mhosva rekodhi. Mushure mekujeka kwemashure mako iyo chirongwa chinodhura kune vese vanyoreri chinoverengerwa. Mushure mekuverenga iwe unosaina mapepa ekuva mugari wenyika.
Iwe unofanirwa kuisa dhipoziti ye30 muzana yemutengo wese zvisati zvaitika. Izvo hazvidzoreke. Mushure mekubhadhara zvinotora mazuva makumi matatu-30 kugadzirisa chikumbiro.
Iwe unobhadhara yasara 70 muzana yemubhadharo mushure mokubvumidza kunyorera, kwaunowana ugari uye pasipoti yeVanuatu. Iwe uchafanirwa kuita rwendo rwenyika kuti uite mhiko yekuremekedza.
Pasipoti yako yeVanuatu ichave inoshanda kwemakore mashanu. Inogona kuvandudzwa pasina imwezve mari.
Mari inodiwa yeVanuatu
Iwe uchave nekodzero yekuva mugari weVanuatu kuburikidza neiyo imwe chete USD 130,000 yezvipo kuVanuatu Development Support Chirongwa. Kana iwe ukanyorera wega, imubhadharo wakambodiwa, unovhara maitiro ese uye unokupa hupenyu hwese hupenyu.
Kana iwe uchida kuunza nhengo dzemhuri yako zvakare, mari yekuwedzera inoshanda.
> Yemhuri ye4: murume / mukadzi wako nevana vaviri - USD 35,000
> Kune yega yega yekuwedzera vana - USD 20,000
> Kune wega wega wekuwedzera mwana mukuru pasi pemakore gumi nemasere uye anopfuura makore makumi maviri nemashanu - USD zviuru makumi matatu
> Kune mumwe nemumwe mubereki anovimba anodarika makore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa - USD 65
Nyika inopa yakakwana mutero yekugara mamiriro: hapana mutero wemari, mutero wemidziyo kana inowana mutero.
Kutsigira kwevatengi kuCitizenship nekudyara kweVanuatu
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents yeVanuatu uye Citizenship ne Investment Lawyers yeVanuatu inopa vatengi uye mhuri dzavo muVanuatu nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuVanuatu, kugara nekudyara kubva kuVanuatu uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Iwo masevhisi edu haana kungogumira kune kugara nekudyara kubva kuVanuatu kana Golden Visa kubva kuVanuatu kana ugari nekudyara kubva kuVanuatu kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara dzimba kubva kuVanuatu, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Vanuatu kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muVanuatu uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuVanuatu uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veVanuatu:
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa yeVanuatu, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeVanuatu, inokwanisika investment immigration solicitors eVanuatu, Citizenship inokwanisika nevarairidzi vezvekudyara yeVanuatu, Citizenship inodhura nemagweta ekudyara eVanuatu uye inotsigisa yekufambisa yekufambisa yeVanuatu
Ugari nekudyara kubva kuVanuatu kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muVanuatu kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuVanuatu kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuVanuatu kuenda ku106 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuVanuatu.
Goridhe visa zvirongwa muVanuatu kuenda ku37 Nyika.
Ugari nezvirongwa zvekudyara kubva kuVanuatu kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuVanuatu kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuVanuatu kuenda ku106 Nyika.
Ugari neInvestment yeVanuatu kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muVanuatu nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muVanuatu, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaita kwavo kweCitizenship nekudyara kweVanuatu. Tine tie-up nevashoma varidzi venzvimbo muVanuatu vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muVanuatu, kutora zvakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveVanuatu nekudyara muzvivakwa muVanuatu.
Unoda kuziva - Vanuatu Citizenship neInvestment
Citizenship neInvestment Gweta yeVanuatu ichapa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuVanuatu. Yedu akajairwa masevhisi e Citizenship neInvestment kuVanuatu inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utame kubva kuVanuatu kana kuenda kuVanuatu, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Citizenship nekudyara kweVanuatu kune vatengi kuti vawane Citizenship yeVanuatu uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Zvichienderana neyakafanira kushingairira mushumo weVanuatu, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi nehukama hwako nekudyara kunyorera yeVanuatu isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye emhuri nhengo pasipoti.
Dudziro uye apostile emagwaro Ugari nekudyara kunyorera Vanuatu. Magweta edu akasarudzika e Citizenship nekudyara kweVanuatu uye goridhe vhiza ichabatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera yeVanuatu yagadzirira, isu tichazoizadza neakakodzera zviremera zveVanuatu.
Kamwe chikumbiro chako cheU Citizenship nekudyara kweVanuatu chabvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services muVanuatu kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muVanuatu:
Citizenship nevekudyara masevhisi eVanuatu hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera zvombo uye mabara kubva kana kuenda kuVanuatu.
Citizenship nezvirongwa zvekudyara zveVanuatu hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muVanuatu kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuVanuatu.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kweVanuatu hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muVanuatu.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara yeVanuatu haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muVanuatu.
Citizenship nevekudyara masevhisi eVanuatu haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiri kana zvombo zvenyukireya muVanuatu.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweVanuatu haruwanikwe kune vanhu veVanuatu vanoita mukutengesa, kuchengetedza muVanuatu, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara yeVanuatu haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa yeVanuatu haisi yezvitendero uye masangano avo muVanuatu.
Citizenship nebasa rekudyara mu Vanuatu haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muVanuatu.
Ugari Hwedu magweta muVanuatu haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muVanuatu.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veVanuatu neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muVanuatu kubvumidzwa kunyorera Citizenship nekudyara muVanuatu.
Ugari nekudyara muVanuatu nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa hukuru hwehukama nerutsigiro rwekudyara muVanuatu yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muVanuatu.
Inotsigirwa nehukama hwepasi rose neyakaitika mari uye ruzivo rweVanuatu, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hwedu Hugari nevekudyara masevhisi eVanuatu inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheVanuatu.
Isu takatora makore echiitiko kune hunyanzvi hwehukama kuenda kuVanuatu kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuVanuatu.
Ruzivo rweHurumende nevemari vanokumbira mari kuVanuatu nevamiriri vepamutemo veVanuatu vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veVanuatu kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Usati uri Citizenship yeVanuatu uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro ichave iriko kune bhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuVanuatu
Isu tine ruzivo rwepasi rose mu Citizenship nekudyara kusanganisira Vanuatu, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Citizenship yako nekudyara kuVanuatu inokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weCitizenship neInvestment kuVanuatu
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweVanuatu ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veVanuatu, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weCitizenship nechirongwa chekudyara cheVanuatu uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeVanuatu
Maitiro Ekubvumidza Basa reVanuatu
Kwekugara kwenguva pfupi muVanuatu
Permanent Residence muVanuatu
Embassies uye ma Consulates eVanuatu
Ugari neInvestment muVanuatu uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muVanuatu nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira pamwe nemhuri yako kuVanuatu nekudyara mari, isu semumwe wako weVanuatu, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muVanuatu nemitengo inodhura.
Kunze kweCitizenship nekutsvaga kwekudyara kweVanuatu, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muVanuatu, ayo iwe aunogona kuwana pasi peimwe amburera inopihwa nechero vamwe varairidzi veVanuatu ichitiita one-stop shop yeVanuatu nenyika dze106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi reVanuatu mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kweVanuatu nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muVanuatu nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muVanuatu kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muVanuatu yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muVanuatu
Chero ani investor anotamira kuVanuatu angazoda akaundi yako yebhangi muVanuatu uye account yebhangi yekambani muVanuatu, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Sipo yekubhadhara muVanuatu
Kana iwe uchida kubvunza muVanuatu, ye mhinduro dzemadhijitari muVanuatu senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muVanuatu kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Vanuatu kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muVanuatu kutanga pakarepo muVanuatu.
HR Services muVanuatu
Our kambani yevashandi muVanuatu inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muVanuatu vakasununguka.
Virtual Nhare dzeNhamba dzeVanuatu
Bhizinesi foni masystem eVanuatu pamwe ne nhamba dzeVanuatu Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muVanuatu
Accounting, kushingairira kwakakodzera muVanuatu uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muVanuatu
Setup bhizinesi muVanuatu
Mushure meCitizenship nekudyara kuVanuatu, setup bhizinesi mu Vanuatu.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muVanuatu
Kugadzira Webhu muVanuatu
Ecommerce Kuvandudza muVanuatu
Webhu kuvandudza muVanuatu
Blockchain kuvandudza muVanuatu
App Kubudirira muVanuatu
Software Kubudirira muVanuatu
Magweta e Citizenship neInvestment muVanuatu
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro dzeVanuatu uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha kwazvo, kuVanuatu, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeVanuatu ine vamiririri vevanoona nezvekupinda muVanuatu, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeVanuatu ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzeVanuatu vanhu nemhuri dzavo. Hedu Citizenship nevekudyara timu yeVanuatu inopa zvakagadzirwa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera mvumo yekugara yeVanuatu, pane mvumo yekugara muVanuatu inogamuchirwa.
Simba regweta reVanuatu rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako ne Citizenship nevamiriri vezvekudyara muVanuatu. Kana iwe uri muVanuatu kana kuronga kushanyira Vanuatu, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweVanuatu uri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeVanuatu. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weVanuatu.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment muVanuatu
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muVanuatu?
Kugara nekudyara kuVanuatu, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana kugara kweVanuatu kuburikidza nekudyara muhupfumi hweVanuatu kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuVanuatu, ugaro nehurongwa hwekudyara hweVanuatu inotsigirwa nekugara nemabasa ekudyara mari kuVanuatu, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muVanuatu, kugara kwakanyanya nemagweta ezvekudyara muVanuatu uye kugaramo kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuVanuatu, vachishanda pakunogara zvakanyanya nevamiririri vezvekudyara muVanuatu, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika. muVanuatu.
Kugara nemabasa ekudyara mari kuVanuatu | Kugara nenzvimbo dzekudyara muVanuatu | Kugara nemagweta eInvestment muVanuatu | Kugara nemagweta ekudyara muVanuatu | Kugara nevatengesi vezvekudyara veVanuatu
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muVanuatu?
Ugari nekudyara kuVanuatu, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mugari weVanuatu kuburikidza nekudyara muhupfumi hweVanuatu kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muVanuatu. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuVanuatu, ugari nehurongwa hwekudyara hweVanuatu inotsigirwa nehugari hwemo nevekudyara mabasa eVanuatu, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muVanuatu, ugari hwakanakisisa nemagweta ezvekudyara muVanuatu uye hukama hwakanakisa nevanoona nezvekudyara veVanuatu, vachishanda kuva chizvarwa chakanakisa nevamiririri vezvekudyara muVanuatu, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muVanuatu
Affordable Investor immigration services yeVanuatu | Vanodhura vanopinda munyika vanokumbira muVanuatu | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muVanuatu | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muVanuatu | Vanodhura varidzi vekunze vanoona nezveVanuatu | Affordable immigration law firms for Vanuatu
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muVanuatu?
Yechipiri pasipoti muVanuatu, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mugari wepamutemo weVanuatu kuburikidza nekudyara muhupfumi hweVanuatu kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, real estate, bhizinesi, hurumende zvisungo, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuVanuatu, yechipiri pasipoti chirongwa cheVanuatu inotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eVanuatu, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muVanuatu, magweta echipiri epasipoti muVanuatu uye akanakisa echipiri mapasipoti vanopa mazano kuVanuatu, vanoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muVanuatu, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muVanuatu.
Chechipiri pasipoti masevhisi eVanuatu | Chechipiri pasipoti vamiririri muVanuatu | Yechipiri mapasipoti magweta muVanuatu | Yechipiri mapasipoti magweta muVanuatu | Chechipiri pasipoti vanopa mazano veVanuatu
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muVanuatu?
Ndarama vhiza muVanuatu, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeVanuatu kuburikidza nekudyara muhupfumi hweVanuatu kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuVanuatu, chirongwa chendarama vhiza yeVanuatu inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eVanuatu, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta muVanuatu, akanakisa egoridhe vhiza magweta muVanuatu uye akanakisa egoridhe vhiza varairidzi eVanuatu, vanoshanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muVanuatu, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa mafemu muVanuatu.
Ndarama vhiza services yeVanuatu | Goridhe visa vamiririri muVanuatu | Magoridhe vhiza magweta muVanuatu | Magoridhe vhiza magweta muVanuatu | Goridhe vhiza varairidzi veVanuatu
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweCitizenship nekudyara muVanuatu?
Pashoma kudyara kweCitizenship nekudyara muVanuatu iUS $ 150,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuVanuatu seCitizenship nekudyara?
Ehe, gweta redu muVanuatu nevamiriri muVanuatu vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara muVanuatu.
Ugari neInvestment kuVanuatu inodhura?
Mutengo weCitizenship neInvestment kuVanuatu uye Citizenship nemari inodiwa mari yeVanuatu ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubhadharisa fizi ye Citizenship neInvestment kuVanuatu, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvekutsigira Citizenship neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuVanuatu kana investor visa kuVanuatu?
Ugari nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeye Citizenship nekudyara kuVanuatu kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuVanuatu kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kuVanuatu kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuVanuatu kubva kuSouth America, Citizenship by investment to Vanuatu from Malaysia, Citizenship by investment to Vanuatu from Bangladesh, Citizenship by investment to Vanuatu from Indonesia, Citizenship by investment to Vanuatu from Sri Lanka, Citizenship by investment to Vanuatu from Nepal, Citizenship by investment to Vanuatu from India and Citizenship nekudyara kuVanuatu kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance yeVanuatu
Kumbira Mahara kubvunza kune yako Citizenship neInvestment kuVanuatu
Akakosha mazwi muCitizenship neInvestment yeVanuatu
Tourism uye Kubhururuka,
Zvemagariro Services & Kubudirira Kwemaguta
Zvekurima neMarine Resources,
Zvemari Services, Kutengesa neindasitiri uye Kuenda Kunze,
, Ministry of utano
Vechidiki, Mitambo uye Tsika,
Veruzhinji Vashandi uye Inishuwarenzi Yenyika
Gavhuna-General, Hofisi ye Imba yeHurumende
Link to Dhipatimendi Rekupinda muVanuatu , Inotungamira mukuumba marongero ekuchimbidza Kufamba kwevanhu muVanuatu